Ungabayeka Njani Amasela ekubeni Izinto Zakho
NgoLwesine, Julayi 8, 2010 NgoLwesihlanu, ngoJuni 15, 2018 Douglas Karr
Kwangoko kule veki, abanye benu baqaphele ukuba ndiye emva kwebhlog ebibayo umxholo Martech Zone. Ngamanye amaxesha, oku kuyenzeka xa umntu onwabile kwaye ethatha isigqibo sokuba bandenzela inceba ngokwandisa abaphulaphuli bam. Akunjalo. Le joker yade yapapasha iposti kwindawo yomntu wesithathu enegama layo njengombhali. Ayamkelekanga.
Lo mfo uthumele iposti ebiweyo kwibhlog yakhe yebhlog. Ayibobulumko oko, kuba iBlogger iyahambelana noMthetho we-Digital Millenium Copyright Act (DMCA) amanqaku okususa. Ndizalise ifom yeBlogger kwaye ndafumana isaziso namhlanje sokuba bayisusile imixholo ebiweyo.
Ndiyibulela kakhulu inkxaso yeBlogger kule nto!
Ukulungiselela njani ukuBiwa kweMxholo wakho
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngabom ndishiya i-breadcrumb trail kwiiposti zam zebhlog. Kunqabile ukuba la masela aphinde abhale okanye akope umxholo kwaye awuncamathisele. Endaweni yoko, babhala ii-algorithms kwaye babambe i-RSS feed yakho kwaye bayikhuphele ngaphandle kwibhlog yabo. Uninzi lwexesha okwenzekayo, ibhlogger ayazi. Ndingu. Esinye sezizathu zokuba ndiphuhlise Iplagi yePostPost yayikukuba ndikwazi ukuhlela nokongeza umxholo kunyawo lwam. Zonke iiposti kwi-RSS feed zam zinentlobo ethile yekhonkco ebuyela kwibhlog yam.
Emva koko, ndamisa Izaziso zeGoogle kunye ne-domain yam njengegama lokukhangela (kunye nabanye andinakukuxelela). Ngoku - ngalo lonke ixesha umntu enxibelelana nebhlog yam, ndifumana isilumkiso nge-imeyile kunye nesithuba seposti. Iyabonakala ngokukhawuleza xa ndifunda umxholo wam emzimbeni wesilumkiso.
Mhlawumbi enye yezona zinto zintle kakhulu endizenzayo kukuba ndithenge kwangoko imifanekiso kwi-iStockPhoto kuzo zonke izithuba zam kwiveki ezayo okanye njalo. Kuba ndibhatala iifoto, kusemthethweni ukuba ndizisebenzise kodwa akekho omnye umntu. Ukuba usisidenge ngokwaneleyo ukuba ungaba umxholo wam, mhlawumbi upapasha le mifanekiso ithengiweyo. Ngoku ndinenkampani enkulu yesihogo ekulweni ubusela obunamalungelo obunini kwicala lam. Ngokukhawuleza xa ndibona izithuba ezipapashiweyo, ndinxibelelana nenkxaso ngayo iStockPhoto kwaye uxele isithuba ngasinye, imifanekiso, imvelaphi kunye nokuba zibiwe.
Ukunyaniseka, andiqinisekanga ukuba iStockPhoto ilandele nawaphi na amatyala… bonke bathathe izithuba xa ndizifumene ndaza ndabaxelela. Kusekho ulonwabo oluncinci kulo kum, nangona kunjalo. Andifuni ukuba kwicala elingalunganga lesuti yelungelo lokushicilela ngeStockPhoto. Baneepokotho ezinzulu kunye namagqwetha amaninzi.
Xelela Abahlobo babo
Andithethi ngalonto. Ndenza a Whois.net khangela ukufumanisa inkampani yokubamba kunye nomntu ongumnini wesiza. Ndiza kuzama ukunxibelelana nomntu ngokuthe ngqo ekuqaleni. Ke ii-imeyile ziyaphuma ziye kwinkampani yokubamba, ii-tweets ziba nomsindo, kwaye imiyalezo ye-Facebook Wall iyathunyelwa. Andiyi kuyeka de ndiqale ukufumana iimpendulo.
Njengoko besenditshilo ngaphambili, khange ndikhe ndigqithe kule ndawo. Kusoloko kukho ithuba lokuba umntu abe umxholo wam kwaye abe kude nonxweme, afihlwe, kwaye kube nzima ukuleqa. Ndizakwenza konke okusemandleni ukuba ndibaxele kwiinjini zokukhangela ngelo xesha, kodwa andizukubayeka babaleke. Akufanelekanga!
Isisombululo se-SaaS: Siyacetyiswa kwaye si-Octiv
Jul 9, 2010 ngo-8: 12 AM
Esi sisithuba esihle!
Kodwa bendizibuza ukuba ungandinika na ingcebiso kwimeko ekhohlisayo kodwa efanayo.
Masithi abantu bathumela imifanekiso yakho kunye neefoto zemifanekiso yakho kwibhodi yemifanekiso engaziwayo (funda: 4chan.org), eyaziwa ngokungakhathali nantoni na. Ndingaya njani malunga nokususa loo nto ukuba andazi nokuba ngubani lo uyithumelayo?
Jul 9, 2010 ngo-9: 20 AM
Unokwenza izinto ezimbalwa:
1) Jonga imifanekiso yakho. Beka inqaku kubo abathi inkampani yakho okanye igama lewebhusayithi. Jonga iisayithi ezinje ngeStockphoto kwaye uyakubona oku.
2) Kucacile kwimithetho ye-4chan ukuba ulwaphulo-mthetho luza kujongana kakhulu. Ndiya kuqhagamshelana nabo kwiphepha labo lokunxibelelana http://www.4chan.org/contact -Ukuba abaphenduli, thumela imiyalezo nge-Twitter okanye naphina apho unakho.
3) Umzamo wokugqibela womjelo: Ungabamangalela. Ngokukodwa ukuba indawo ayiyiyo eyangaphandle kwaye abanini bayo bayaziwa, landela emva kwabo.
Jul 9, 2010 ngo-9: 29 AM
Ngokuqinisekileyo oku kuya kuwela kudidi "Lumkela iDoug".